Iindaba -Ibhayoloji yaseChenguang ixhasa isikolo saseprayimari iXiaohekou kangangeminyaka eli-11 ilandelelana
Nge-2 kaDisemba, umsitho wokunikezelwa kwamabhaso e-Chenguang Group Teaching reforming base base xiaohedao kwisikolo samabanga aphantsi sabanjwa ngokusesikweni. I-biology yaseChenguang inike i-93600 yuan kootitshala abathathu abagqwesileyo be-xiaohehe grade grade 1-6 kuvavanyo olumanyeneyo lwe-2019-2020 unyaka wokufunda kunye nootitshala abaphumelele amabhaso abathathe inxaxheba kukhuphiswano ezahlukeneyo. Ngaphezulu kootitshala abangama-40 abawongwa. Lo ngunyaka we-11 ngokulandelelana ukuba i-Chenguang biology ixhase ngemali isikolo samabanga aphantsi iXiaohe.
UHan Zhihua, utitshala webanga lesihlanu wezibalo, uphumelele ibhaso le-7300 yuan ngeli xesha. Egameni lesininzi sootitshala besikolo samabanga aphantsi iXiaohe, uthethe kulo msitho ukubulela ibhayoloji kaChenguang ngebhaso. Uye wathi uza kuphila ngokufeza umsebenzi wakhe kwixa elizayo kwaye enze iinzame ezinkulu zokuhlawula i-Chenguang biology kunye ne-Xiaohe kwisikolo samabanga aphantsi ngempumelelo encomekayo.
Kule minyaka idlulileyo, i-Chenguang Biotechnology Group Co, Ltd. ibisoloko ibambelela kwingcinga "yophuhliso lwamashishini kunye nabantu", izityebi kunye nokucinga ngemfundo, kwaye ayilulibalanga uphuhliso lwemfundo yasekhaya ngelixa isiba nkulu kwaye yomelele. Ukusukela ngo-2009, inkampani ichithe isixa semali minyaka le ekuphuculeni amaziko okufundisa kunye nezixhobo zabafundi kwizikolo ezithile zaseprayimari neziziisekondari, ukuvuza ootitshala abagqwesileyo, ukuxhasa abafundi abahlwempuzekileyo abagqwesileyo kuviwo lokungena ekholejini, njl. Ngo-2015, "uChenguang scholarship" yasekwa eQuzhou No.1 kwisikolo samabanga aphakathi ukuwonga abafundi abagqwesileyo ababengeniswe "kwiYunivesithi i-985". Kule minyaka ilishumi idlulileyo, i-biology ye-Chenguang inikele ngaphezulu kwe-2 yezigidi ze-yuan ukunceda i-Xiaohe kwisikolo saseprayimari ukuphucula iimeko zokuqhutywa kwesikolo, ukunikezela ngootitshala abagqwesileyo, ukunceda abafundi abangaphezulu kwama-50 abahlwempuzekileyo ukuba bafeze iphupha labo leYunivesithi, nangaphezulu kwabafundi abangama-50 abagqwesileyo uviwo lokungena kwikholeji liphumelele i "Chenguang scholarship", ephumelele indumiso ebanzi kuluntu.
Kwinkqubo yophuhliso lweChenguang biology, ithatha uxanduva kwezentlalo kwaye ithatha inxaxheba kwimisebenzi yentlalontle yoluntu. Inkampani yenze igalelo elikhulu ekuxhaseni ukuphuculwa kweentlalontle zentlalontle, uncedo lwenyikima, ulwakhiwo lwasezidolophini, ezothutho kunye nemfundo, kunye nokulwa imeko yobhubhane, kunye notyalo mali olupheleleyo olungaphezulu kwezigidi ezingama-23 ze-yuan.